Fitsapana COVID-19 —— Detection SARS-CoV2 - Tiangen Biotech (Beijing) Co., Ltd.
Ny detection acid nukleika dia fantatra amin'ny fomba lehibe iray hamaritana ireo marary sy hifehezana ny toe-javatra COVID-19. TIANGEN dia manome reagents, akora, fitaovana ary vokatra hafa ampiasaina amin'ny fitehirizana ny virus, ny fitrandrahana ary ny fikarohana ireo laboratoara manana mari-pahaizana LDT, CDC, mpamokatra kitikileta SARS-CoV2, ary singa hafa. Araka ny fepetra takiana manokana dia afaka manome vokatra sy vahaolana namboarina i TIANGEN.
Hatramin'ny fiatoana COVID-19 dia nanolotra fanandramana 5 tapitrisa i TIANGEN ho toy ny akora fitrandrahana asidra nukleostika virus ary reagents PCR tena izy ho an'ny mpamokatra sy mpamantatra reagena 200 mahery hita any Azia, Amerika avaratra sy atsimo ary firenena eropeana. Ary manampy olona an-tapitrisany amin'ny firenena maherin'ny 30 manerana an'izao tontolo izao.
Ireo vokatra fitrandrahana virus TIANGEN, toy ny akora, dia nekena tamin'ny tatitra fanombantombanana momba ny fampiasana vonjy maika ny COVID-19 navoakan'ny World Health Organization tamin'ny volana jona 2020, ary voatanisa ao amin'ny lisitra naroson'ny reagents vaovao COVID-19 manerantany navoakan'i ny Global Fund amin'ny Janoary 2021.
Vahaolana ankapobeny amin'ny COVID-19
Buffer fitehirizana am-bava ny savily
Fampiharana: fitehirizana ny ati-doha, fo, voa, spleen, aty, havokavoka ary timo, sns.
Mitahiry RNA: 1 andro amin'ny 37 ° C, 7 andro amin'ny 15-25 ° C, na 4 herinandro amin'ny 2-8 ° C. Fitehirizana maharitra amin'ny -20 ° C na -80 ° C.
Kitapo fitrandrahana viriosy efa nifanaraka
Andiam-pitrandrahana asidra niokleary manual
● Fitaovana tsotra ihany no ilaina hamitana ilay fanandramana fitrandrahana.
● Ny entana azo ampiasaina dia fonosina misaraka mba hisorohana ny fandotoan'ny hazo fijaliana.
Fomba mifototra amin'ny tsanganana: Aza ilaina fitaovana
Kitapo fanomanana santionany miorina amin'ny tsanganana spin
Pipet elektrika (marina kokoa, haingana ary mety)
Fomba mifototra amin'ny vakana
Kitapo fanomanana santionany miorina amin'ny vakana andriamby
Mpisaraka Magnetika 95 mahery
● Ny anzima RT mora tohina, qPCR dia omena miaraka amin'ny rafitra buffer fanehoan-kevitra nohavaozina.
● Azo fantarina tsara ny môdely ambany be dia be.
Reagent PCR miorina amin'ny probe / anzima / ODM / OEM
Rafitra Pipetting mandeha ho azy (fanamboarana valiny mandeha ho azy haingana sy haingana)
Famindrana: fantsona tokana na 8
Fampiharana: fananganana fanehoan-kevitra PCR na qPCR